Kedu otu anyị si eri afọ ojuju site na ụdị | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ dijitalụ katalọgụ nkwusa onye nkwado, Zmags, iji mepụta ihe omuma a mara mma ma nwekwuo nghọta banyere otu anyị si eri ọdịnaya site na ụdị dị ka ndị ahịa. Fọdụ nchọpụta achọpụtala ihe m maara, ebe ndị ọzọ juru. Agbanyeghị, ozi niile bụ na ọdịnaya gị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe n'ofe ọtụtụ ngwaọrụ.
Olee ot you ui ga-esi mee ya? Ihe a na-achọpụta na arụmọrụ na-arụ ọrụ n'ofe ngwaọrụ. Iji onyonyo na mgbasa ozi bara ụba na-ejidekwa oge elebara anya. Inwe ọdịnaya dị iche iche na-enyere aka na ntụgharị.
Olee ihe masịrị gị?
Tags: onye ahịacontent Marketingahịa efuọgụgụmbadamba nkume
Mkpesa adịghị mfe
Nov 12, 2012 na 3:12 PM
Obi dị gị ezigbo ụtọ ịrụ ọrụ na infographic a! Nchịkọta na-adọrọ mmasị banyere ụdị ọdịnaya a na-ewepụta, yana ebe anyị na-agụ ha.
Nov 12, 2012 na 10:52 PM
Really kpụrụ ụkwụ na nke a. Ọ bụ ezigbo ihe ọmụma ama ama - M hụrụ imewe na ozi ahụ n'anya!
Nov 13, 2012 na 3:59 PM
Ndewo Jenn, Ọ ga-amasị m iji infogrpahic a na Resouce Center maka ihe omume m na-ere. Kedu ka m ga-esi mee nke a?
Nov 13, 2012 na 5:51 PM
Ndewo Stephanie! Obi dị m ụtọ inyere gị aka pụta, ma ọ bụ tinye gị na ndị mepụtara ozi ahụ. Biko gbatịa aka m jenn@dknewmedia.com. Daalụ!